China upamhi 900mm 1130mm upvc epurasitiki mapepa emashizha vagadziri uye vanotengesa | JIAXING
Chigadzirwa Chigadzirwa: UPVC Roof Sheets
Chimiro: Corrugated Waves
Rukoko Type: Single rukoko; Matanda matatu, 4Layer
Ruvara: Green.White, Bhuruu, Yero, Grey, Yakatemerwa)
Upamhi: 720mm, 930mm, 1130mm, 1350mm
Kureba: Zvinoenderana nemutengi kubvunza (Zvakajairwa max 12meter)
Ukobvu: Kazhinji 0.8mm-3.0mm
Kushanda: Yegiredhi-giredhi chirimwa, simbi chirimwa, imba yekuchengetera, murimi musika uye carport, nezvimwe.
1. Seunyanzvi hwakawanda hwekugadzira zvigadzirwa zvematenga, XINGFA inodyara mamirioni masere emadhora ekuvaka iyo 20000 mativi emamita fekitori uye nzvimbo yekushambadzira muTianJin.
2. 16 yekugadzira mitsara uye epamberi zvigadzirwa zveMatombo akaputirwa nesimbi matenga ematairi uye PVC magata system.
3. Zvigadzirwa zvinhu zvakagadzirwa kubva kuFrance uye zvakagadzirwa nevatambi vepamusoro vanobva kuCanada! Zvese zvigadzirwa zvekufukidza zvemhando yepamusoro SeNew zealand neKorea! Saka ibwe raJIAXING rakabatanidza simbi yekukwirisa Tile garandi makore makumi matatu--50 uye hupenyu hwese! Usambofa wakanyangara ruvara!
4. JIAXING inopa zvigadzirwa zvakagadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
5. JIAXING inovimbisa yakanakisa mutengo, mhando uye kugutsikana kune vatengi.
6. JIAXING Roof's dombo chip rakaputirwa mataira esimbi ane matanda mapfumbamwe pamusoro pehwaro hwesimbi. Isu tinovimbisa kurarama kwenguva refu kwezvigadzirwa zvedu. Ticharamba tichigadzira chete akanakisa mataira edenga ayo anovandudza nzvimbo yedu yekugara.
Kufanana nekuvakwa kwematopu, patio, chikafu nemishonga maindasitiri, zvipatara, zvikoro uye mashedhi emabhizimusi, anoshandiswa zvakanyanya kuimba yekugara, villa, workshop, imba yekuchengetera, magetsi ekuvaka, greenhouse, imba mbozha, kurira-kwekuvhara madziro nemabhokisi ekushambadzira etc. anotenderwa kupa mataira edenga emabasa mazhinji ehurumende muChina, pamwe neMid-East, South America nezvimwe.
1. Professional mhando kudzora system uye On-nguva dhirivhari,
2. Kupa technical technical yekuisa.
3. OEM & ODM, zvakare ipa yakagadziriswa sevhisi.
4. Inokodzera neSGS / ISO9001 / CE
5. Ipa rairo yehunyanzvi kune yako dhizaini dhizaini.
6.Tichachengeta chakavanzika chevatengi nzvimbo yekutengesa, dhizaini mazano uye zvimwe zvese zvakavanzika ruzivo.
Inoenderana Chigadzirwa (Yese UPVC padenga pepa chimiro)
hwakagadzwa muna 1998 uye ndiye aitungamirira akaigadzira epurasitiki (PVC / FRP / PC) nemakadhibhokisi uye rusvingo ukomba mu China. Pashure pemakore gumi ekuvandudza, kambani yedu ine yegore yekugadzira inokwana anenge mamirioni matanhatu emamirimita,Isu tinogamuchira nemoyo wese vatengi vekare nevakuru kune bhizinesi kutaurirana, kutaurirana uye kubatana kubatana!
Pashure: PC Twin-Rusvingo Transparent 8Mm Polycarbonate Hollow Sheet
Zvadaro: kureba wave pvc plastiki padenga jira 1070 hupamhi hwepurasitiki padenga
UV dziviriro epurasitiki nebwe denga matiles epurasitiki ...
Corrugated Plastiki PVC UPVC APVC Roof Sheet
Upvc yemarata yedenga sheet
chiedza uremu upvc denga jira chemarata epurasitiki ...
Corrugated denga jira PVC Roofing Sheets